धादिङको नेत्रावती–५ मा किसानलाई दिएका मिनी टिलर मै घोटला, संस्थाले निःशुल्क दियो, वडाले पैसा पचायो:: Naya Nepal
धादिङको नेत्रावती–५ मा किसानलाई दिएका मिनी टिलर मै घोटला, संस्थाले निःशुल्क दियो, वडाले पैसा पचायो
धादिङको नेत्रावती जबजोङ गाउँपालिका–५ मा किसान र किसान समुहलाई निःशुल्क रुपमा वितरण गरिएका मिनी टिलरमा आर्थिक घोटला भएको छ ।
‘एक्सन नेपाल’ नामक एक संस्थाले वडाका ६ जना किसानलाई निःशुल्क वितरण गरेको मिनी टिलरमा वडाले १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ घोटला गरेको हो । गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ नम्बर वडामा वितरण गरिएका मिनी टिलरमा ५ नम्बर वडाले मात्रै प्रतिकिसान २८ हजारका दरले रकम लिएको छ ।
सुरुमा गाउँपालिकाको ६० र किसानले ४० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नेगरी मिनी टिलर किन्ने कुरा भएर किसान र किसान समुहसँग उठाएको ४० प्रतिशत रकम वडा नम्बर ५ ले मात्रै फिर्ता गर्न बाँकी छ । अन्य २ वडाले किसानको रकम फिर्ता गरिसकेका छन्।
“इच्छुक किसालने मिनी टिलर लिनु भनेर सूचना आयो । हामीले प्रतिकिसान २८ हजार रुपैयाँ बुझाएर मिनि टिलर लियौँ। तर हामीलाई एक्सन नेपाल संस्थाले निःशुल्क दिएको रहेछ। पछि संस्थाले सीप पनि आफैँले निःशुल्क दिने बताएपछि ३ र ४ नम्बर वडाले किसानलाई पैसा फिर्ता गरे। तर ५ नम्बर वडाले विभिन्न बहानामा हामीलाई पैसा फिर्ता दिएको छैन,” मिनी टिलर लिने मध्यकी किसान नबिना गुरुङले भनिन्।
उनले थपिन्, “अन्य संस्थाले नि:शुल्क दिएको मिनी टिलरमा त यस्तो घोटला हुन्छ भने अन्य कुरामा के के भएको होला। हामीले वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर अधिकारीलाई पैसा बुझाएका थियौँ । धेरै पटक हामीले पैसा फिर्ता माग्यौँ तर उहाँले कुनै न कुनै बहाना बनाएर टार्दै आउनुभएको छ । कोरोनाको यो दुखद् क्षणमा न अन्य केही आम्दानी छ न आफ्नो पैसा फिर्ता आउँछ।एउटै गाउँपालिकाका ३ र ४ नम्बर वडामा पैसा फिर्ता हूने र ५ मा किन फिर्ता नहुने ? गाउँपालिकाको यो कस्तो कानुन हो भन्दै प्रति प्रश्न गरिन्।”
‘हामीले किसानलाई निःशुल्क दिएका हौँ’
२०७५ चैत्र २९ गते एक्सन नेपाल, धादिङको पुर्ण अनुदानमा नेत्रावती जबजोङ गाउँपालिकाका तीन वडा ३, ४ र ५ का १६ किसान र किसान समुहलाई मिनी टिलर निःशुल्क रुपमा वितरण गरेको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक गणेश ढुँगानाले बताए।
ढँगानाले भने, “हामीले तीनवटा वडाका किसान र किसान समुहलाई १६ वटा मिनी टिलर निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएका हौँ । सुरुमा गाउँपालिकासँग ६०–४० प्रतिशत खर्च गरेर वितरण गर्ने भनिएपनि पछि हामीले नै नि:शुल्क दियौँ । उहाँहरुले सुरुकै सहमति अनुसार किसान र किसान समुहसँग २८ हजारका दरले रुपैयाँ लिनुभएको रहेछ । पछि हमीले नै पूर्ण रुपमा निःशुल्क दिएपछि ३ र ४ नम्बर वडाध्यक्षले किसानको पैसा फिर्ता गर्नुभयो । ५ नम्बरमा अहिलेसम्म पनि पैसा फिर्ता छैन।”
‘हामीले किसानको पैसा फिर्ता दियौँ’
नेत्रावती जबजोङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष विजय कुमार तामाङले एक्सन नेपालले निःशुल्क रुपमा दिएको मिनी टिलर किसानलाई जस्ताको तस्तै वितरण गरिएको बताए।
सुरुमा गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ नम्बर वडामा मिनी टिलर वितरणको कुरा आएको र प्रतिव्यक्ति र किसान समुह २८ हजार रुपैयाँ लिएर वितरण गर्ने कुरा भएपनि पछि संस्थाले पूर्ण रुपमा निःशल्क दिएपछि वडानम्बर ३ र ४ ले किसान र समुहको रकम फिर्ता गर्यौँ ।
उनले भने, “हामीले संस्थासँगको पहिलो सहमति अनुसार प्रतिकिसान र समुहसँग २८ हजारका दरले रकम लिएका थियौँ । पछि टिलर दिने संस्थाले नै निःशुल्क दिने भनेपछि किसानको पैसा फिर्ता गयौँ । ५ नम्बर वडाले फिर्ता नगरेको भनेर छिमेकी वडाबाट हाम्रोमा पनि गुनासा आएका छन्।”
गाउँपालिका प्रमूखद्वारा बँचाउ
नेत्रावती जबजोङ गाउँपालिकाका प्रमूख दुर्ग कुमार शाक्यले वडाध्यक्षले किसानसँग लिएको रकम सामाजिक काममै खर्च गर्ने बताएको भन्दै ५ नम्बरका वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर अधिकारीको बँचाउ गरेका छन् ।
गाउँपालिका प्रमूख शाक्यले नयाँ पुस्तासँग कुरा गर्दै भने, “सुरुमा एक्सन नेपाल र हामीले मिलेर काम गर्ने कुरा भएको थियो। पछि उहाँहरुले एक्लै टिलर किन्नुभएछ त्यतिबेलासम्म वडाले किसानसँग ४० प्रतिशत रकम उठाइसकेका थिए । पछि ३ र ४ नम्बर वडाले पैसा फिर्ता गरेछन् ५ ले सामाजिक काममा लगाउने भनेर निर्णय गरेको रहेछ।”
यस्ता व्यक्तिले भूलेर पनि नखानुहोस् मेवा, नत्र…
काठमाडौँ । मेवा कसलाई मन नपर्ला र ? अझ बोटमै पाकेको मेवा झन् आहा। ‘सेवा गरे, मेवा मिल्छ’ उखान यसै बनाइएको होइन ।
मेवा सबैलाई मन पर्ने फलफुल भित्र पर्ने भएकोले नै यो उखान बनाएका हुनुपर्छ हाम्रा पुर्खाहरुले । मेवा खानको लागि मात्र स्वादिष्ट छैन ।
यो स्वास्थ्यको लागि पनि अति फाइदाजनक हुन्छ । अहिले बजारमा मेवा उपलब्ध हुन थालेका छन् । मौसमी फलफूल खोज्नेहरुको लागि यो उपयुक्त रोजाइ बन्नसक्छ ।
१) गर्भवतीले नखाने
२) स्तनपान गराउने महिलाले खानबाट बच्ने
३) एलर्जीको सम्भावना
४) उच्च रक्तचापको औषधी खाने व्यक्तिले
५) मिर्गौलाको पथ्थरी
६) पेट खराब भएमा
७) मुटु सम्बन्धि समस्या
८) घाँटीको समस्या
घाँटीको समस्या हुने व्यक्तिले मेवा खानु हुँदैन । यसले घाँटीलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।